Iindaba zesiXhosa @12:00, 12 eyoMga 2018 – Zibonele FM | 98.2
Iindaba zesiXhosa @12:00, 12 eyoMga 2018
Written by Ashia Nkontsa on 12/12/2018
Ubanjiwe umqhubi wesithuthi sika wonke wonke
Kubanjwe umqhubi wesithuthi sikawonke wonke enamatikiti angamashumi mathandathu anesibini nabenomdliwo oxabisa malunga namashumi asibhozo anesibini amawaka eerandi ngethuba ezama ukugqitha esinye isithuthi kanye kwidolo elikuhola wendlela uN2 cebukuhle eJan Smuts Drive izolo. Oku kulandela emva kokuba igosa lakwandaba zabantu liye lagqiba ekubeni likhangele into elinokuyifumana ngalomrhanelwa nominyaka ingamashumi mathathu anesithathu ubudala nalapho liye lafumanisa ukuba uthe mome ngamatyala asendleleni. Kwiiveki ezimbalwa ezidlulileyo isebe lakwandabazabantu lilumkise abaqhubi ngelithi mabajonge yonke imicimbi yabo ukuba imi ngendlela ukuze kunqandeke unongekehli xa kunokwenzeka ukuba bamiswe ezindleleni zeli lomzatsi afrika, ukanti kule iveki isixeko sasekapa sibambe imikhankaso yokujonga abo banemidliwo abangayihlawuleliyo khonukuze abo babandakanyekayo bafumane ithuba lokuyakuqoshelisa iinyewe ezikumila kunjalo.
Luhambe kakuhle unyulo leANC kwinkomfa yokukhetha abagqatswa
I ANC kwiphondo lentshona koloni ithi lombutho ulandela inkqubo eyiyo ukwenza uluhlu lamagama abagqatswa abazakuyimela emva konyulo likazwe-lonke lonyaka ozayo. ngalempela-veki i ANC ibibambe inkomfa yawo yokukhetha abagqatswa abazakufakwa kuluhlu lamagama azakuyimela epalamente. Iphondo lentshona koloni lelona lombutho kufuneka lisebenze nzima ukuzuza inkxaso nanjengoko lingekho phantsi kolawulo lalombutho. Okwakaloku nje i ANC inezihlalo ezilishumi elinesine kwipalamente yephondo logama inamakhulu mabini anamashumi mane anesine kuzwe-lonke. Owayesakuba yinkulumbuso nenkokheli yeANC kwiphondo lensthona koloni umnumzana Ebrahim Rasool uthi, lenkqubo ibizolile kwaye ingenamagingx-gingxi. Kusenjalo i ANC ithi iqinisekile ukuba izakuluthathela kuyo kwakhona ulawulo kweliphondo nanjengoko sele ilishumi iminyaka umbutho we DA uxhuzula imikhala.
Abahlali bavuyile emva kokugwetywa komdlwenguli
Abahlali baseElsies izolo bavakalise ukuba baphinde babuyela ekubeni nethemba kwinkqubo yoluleko yeli lomzantsi afrika emva kokugwetywa kuka Mortimer Saunders owelwe lityala lokudlwengula nokubulala imveku eminyaka mithathu ubudala. Ngokweengxelo ezikhutshiweyo inkundla ephakamileyo yaseKapa imthe nka ngezigwebo ezibini zobomi eqamele ngenqind’emjiva loka Saunders nazigwebo ezo zilindeleke ukuba zihamba ngaxeshanye. USaunders, wafunyanwa enetyala kwinyanga ephelileyo nanjengoko wafunyaniswa engenalungelo lakuphatha mkhono wekati, ukanti konke oku kulandela emveni kokuba uSaunders wavuma ngokwakhe emapoliseni ukuba wayibulala lemveku emva kokuyidlwengula ngokungenalusini ze umzimba wayo wayakuwulahla kwindawo yoshishino eEpping nowafunyanwa kwintsuku ezisithoba ulahlekile.
uRamaphosa uzakutyumba intloko yakwa SARS
Umongameli weli umnumzana Cyril Ramaphosa uthi kungekudala uzakuqalisa inkqubo yokutyumba intloko yakwa Sars ezakusebenza isigxina. Oku kuza emva kokuba izolo kwinkundla ephakamileyo yomntla rhawuti, liphanzile ilinge lika mnumzana Tom Moyane ukuzama ukubuyela kwesisikhundla. Lenkundla ifumanise ukuba umnumzana Moyane ufedile ukuza nobungqina bokuba lomba ungxamisekeile. Umongameli Ramaphosa usamnkele esisigwebo nesigcina lo ka Moyane ngaphaya kwamasango akwa Sars ntoleyo ixhasa isigqibo sakhe awasithathayo ngakwintloko yakwa Sars. kungokunje uzakuqalisa inkqubo yokutyumba intloko entsha ngokulandela izindululo zekomishoni yophando ka Nugent. Kusenjalo igqiza lezomthetho lika mnumzana Moyana lithi lizakubhena kwesisigwebo.
uMabe uzojongana nezithyolo zakhe zoncwasa namhlanje
Isithethi se ANC kuzwelonke umnumzana Pule Mabe namhlanje kulindeleke ukuba ajongane nophando elinento yokwenza nezithyolo zesincwaso. Umnumzana Mabe uthyolwe ngumabhalana wakhe ngokumpha-phatha ngenjongo yesincwaso kumatyeli amabini. Abendaba kuleveki baveze ileta ebhalwe lelinenekazi lineminyaka engamashumi amabini anesithandathu ubudala, ebhalela usekela nobhala wombutho unkosikazi Jessie Duarte nalapho achaza indlela esaqala ngayo esisenzo ekwamthembisa ngokuba uzakumgxotha okanye acuthe umvuzo WAKHE ukuba uyamala. kusenjalo oka Mabe ukususela kuthe kwavela ezizithyolo uye wathatha ikhefu elikhethekileyo.
Sibekelwe bucala isigqibo sika Moyane sokuba anikwe uphumaphele
Inkundla ephakamileyo yasePitoli isikhabile isicelo sobefudula engumkomishinala wenkonzo yerhafu uTom Moyane sokuba sibekelwe bucala isigqibo sokumnik’uphumaphele. Oku kulandela isicelo sakhe sokuba acele umngeni ukuba semthethweni kwesasigqibo sokumkhupha esikhundleni sakhe. Kwisigwebo sakhe namhlanje uJaji ochophele elityala uHans Fabricius uvakalise ukuba lenyewe ayingxamisekanga kwaphela nanjengoko esithi uMoyane usilele ukubeka ubungqina obunesihlahla khonukuze kubekelwe bucala esisigqibo yaye ekwadiza nokuba lakomishoni yasekwa ngokusemthethweni nangokusengqiqweni.